Ejiji Nkụzi Style
Foto foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ bụ ụdị ụdị foto kachasị njọ. Ụmụ agbọghọ ọ bụla ma ọ bụ ndị di na nwunye hụrụ ndị a n'anya na-emeso ụdị ịhụnanya ndị a na-egosi na ha nwere obi ụtọ, n'ihi na a ga-ewepụ mmetụta ha nile ebe a. N'okwu a, ọ dị mkpa iburu n'uche ọtụtụ isi ihe dị mkpa, ka obi dị ọcha ma dị ọcha adịghị ele anya na-enweghị isi ma ọ bụ nịgọn.
Ebumnuche maka ịse foto ịse foto
Tupu ị gaa na oge ịse foto oge abụọ , ị ga-eburu ihe ndị dị mma, jiri nlezianya chee echiche banyere uwe, uwe, tinyere iwu nke ọkara nke abụọ na nke kwekọrọ n'ozuzu nke agbapụ. Ihe ọzọ dị ezigbo mkpa bụ nkasi obi na mma uwe, n'ihi na n'ime foto ị kwesịrị igosi ịhụnanya na nlekọta, ọ bụghị nkwenye ma ọ bụ ihe nhụjuanya site na ihe ọ bụla.
A ga-ahọrọ ebe ị ga-ahụ foto ịse foto na-akpa ọchị na ọdịdị ọdịnihu: chọpụta ihu igwe ma gaa ebe a họọrọ tupu oge eruo, ị nwere ike ọbụna ịnweta ule na nzụlite. Ọ bụrụ na ihu igwe dị jụụ, mgbe ahụ, akwa blanket na-ekpo ọkụ ma ọ bụ blanketị ga-abụ ihe dị mma maka ntanetị.
A gwara ndị ọkachamara foto ka ha ghara ịhọrọ otu, mana ọtụtụ ebe maka ịse foto na ụdị ịhụnanya, n'ihi ya ị gaghị abanye na ọnọdụ ọjọọ ma ọ bụ ọnọdụ ọnọdụ si n'ụlọ.
Ọ bụrụ na ị hụ nkwụsị ụfọdụ n'ime onwe gị, jiri nkwuwa okwu kwurịta ya na onye na-ese foto: ọ ga-enwe ike ịhọrọ ọnọdụ kwesịrị ekwesị ka ọganihu dị ala, nsogbu ahụike ma ọ bụ nke abụọ ghara ịkwata foto gị.
Ọnọdụ maka oge ịse foto nke oge ọhụụ nwere ike ịdị iche iche, ma ọtụtụ mgbe a na-emesi ike na ọtụtụ ndị na-ejide ma na-esutụ ọnụ, na-elekọta na nlebara anya.
Nlereanya dị maka oge ịse foto
Ebum n'obi Afrika
Kedu ihe ị ga-eyi uwe ọkpa-une?
Kedu ihe eji eme ballet?
Kedu ihe ma ọ bụrụ na akpụkpọ ụkwụ ahụ siri ike?
Ụdị asụsụ na uwe
Nnọọ na ogige
Uwe oyi maka abụba
Kedu ihe ị ga-eyi uwe ogologo n'oge okpomọkụ?
Kedu ihe ga-abụ ejiji?
Akpụkpọ ụkwụ na sọks
Akwa akpa akwa
Mmetụta nke ịke
Kedu otu esi akụ osisi hyacinth n'ime ite?
Edere akara maka ụmụ agbọghọ
Oatmeal miracle-kissel maka ọnwụ ọnwụ
Nchịkọta izugbe nke ọbara - nhazi ụmụntakịrị
Hemorrhoids - ọrụ
Olee otú na-eri nri cherị ke iduọ?
Ofe gazpacho - uzommeputa
Periodontitis - ọgwụgwọ
Ihe caloric nke mkpụrụ osisi mịrị amị
Kedu otu esi eme ụlọ elu abụọ?
Faile Global: Gwyneth Paltrow amaghị ihe HLS na-ede na ebe nrụọrụ weebụ ya!
Ejiji ejiji - okpomọkụ 2014
Ọbupu ọbịbịa mbụ - mgbaàmà
Popcorn - ọdịnaya calorie
Ụkwụ mkpịsị ụkwụ
Beetroot kvass maka ọnwụ ọnwụ
Nnukwu mmeri nke bikini miri emi
Ihe ngwọta kachasị mma maka ísì ọjọọ si n'ọnụ
Mmiri ara ehi nke Tibet
Ndị na-adịghị arịa ọrịa shuga na - enyere ụmụ nwanyị aka - mgbaàmà, ọgwụgwọ